Fianana Manokana - Tatirano Social Enterprise
Tatirano Social Enterprise Tatirano Social Enterprise Mahakasika What we do Fifandraisana Statirano
Ny tranokalan'ny Tatirano Social Enterprise (hita ao amin'ny tatirano.org) dia tarihin'i Tatirano SARLU. Ny fiainana manokana an'ny mpampiasa anay dia manan-danja ho antsika ary tiantsika ny hiarovana azy. Ity politika ity sy ireo antontan-taratasy mifandraika dia manazava ny fomba hampiasantsika ny mombamomba anao manokana.
Inona no vaovao angoninay?
Raha misafidy ny hanome fanomezana tokana na miverimberina hatrany ao amin'ny kaontinay izahay dia hitahiry ny antsipirian'ny fifandraisana anao raha toa ka nanome alalana anao izahay ho an'ny tanjon'ny fanomezana fanampiana na raha nanao sonia tsy miankina amin'ny fahazoan-dahatsoratra izahay. Tsy mitana ny antsipirian'ny banky na mizara ny antsipirihanao amin'ny fikambanana hafa izahay.
Ny fanomezana natao amin'ny fomba ankolaka amin'ny alàlan'ny Connect for Water dia tantanin'ny mpiara-miombon'antoka aminay amin'ny Connect for Water ary mifanaraka amin'ny politikany manokana sy ny fepetra fampiasana azy ireo araka ny voasoritra ao amin'ny tranonkalany.
Raha misoratra anarana ianao handray mailaka avy aminay, hanangona ny fampahalalana ilaina izahay hanomezana ireo tolotra ireo aminao. Amin'ny maha-kely indrindra, takianay ny anaranao, ny adiresy mailakao sy ny firenenao. Hanangona vaovao avy aminao koa izahay raha toa ianao hameno ny endri-javatra hafa ao amin'ny tranokalanay, ohatra ny taratasy fifandraisanay.
Inona no ampiasanay mombamomba ny tena manokana?
Ny fampahalalana manokana anao ihany no hampiasainay amin'ireo tanjona nofidinao. Tsy ho ampitainanay amin'ny antoko fahatelo intsony ny fampahalalana anao, hafa noho ny mpamatsy tolotra voafantina (izay hotanterahinay ny fepetra takian'ny fifanarahana) na eza no nahazoana alalana na takian'ny lalàna.
Raha manapa-kevitra ianao fa te handray ny taratasy mahakasika anay tsy tapaka dia hahazo ity mailaka ity indray mandeha isan-kerinandro ianao. Hisy rohy tsy voatanisa dia homena amin'ny mailaka izay andefasanao, raha maniry ny hanajanona ny fandraisana ny mailaka avy aminay ianao.
Fampahalalana nangonina mandeha ho azy
Manangona fampahalalana momba ny fitsidihanao ny tranokalanay izahay. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina hampahomby kokoa ny fitsidihanao ny tranokalanay, ry hanampy antsika hanaraka ny safidin'ny fikatsahana ny tranokalanay mba hahafahantsika manao fanatsarana matetika ary ahafahantsika mamaritra ny lohahevitra mahaliana indrindra amin'ireo vondrona mpampiasa manokana. Ny mpampiantrano tranonkala ivelan'ny tranonkala ivelany dia mety miditra koa ny adiresy IP-nao, fampahafantarana miavaka ho an'ny solosainao na fitaovana fidirana hafa. Ny famakafakana ny rakitra hazo dia ampiasaina hanaraha-maso ny fampiasana ny tranonkalantsika, na izany aza, tsy hanandrana hamantatra ireo mpampiasa manokana izahay, afa-tsy raha toa ka misy fisalasalana mitombina fa tsy voahaja ny fidirana amin'ireo rafitra ireo.
Ny cookie dia raikitra litera sy isa kely tehirizinay ao amin'ny navigateur na ny kapoakan'ny solosainao raha toa ka manaiky ianao. Ny cookies dia misy fampahalalana izay mandeha any amin'ny solosainao.
Mampiasa cookies ny tranokalanay mba hanavaka anao amin'ny mpampiasa hafa. Tsy manao anizany izahay ho famantarana anao manokana, fa hanisahana ny isany mpampiasa, diniho ny fironana amin'ny ankapobeny, ary jereo ny fomba andehanan'ny mpampiasa ny tranokalanay. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina hanampiana anay hanatsara ny tranokalantsika, ary koa ho amin'ny tanjona kendrena kokoa amin'ny ara-barotra.
Amin'ny alalan'ny fanohizana ny fitsidihana ilay tranokala, manaiky ny hampiasa ny cookie nay ianao.
Mampiasa ny Google Analytics izahay hanaraha-maso ny haavon'ny fifamoivoizana ary ny fitsidihan'ny tranokalanay. Ity fampahalalana ity dia manampy anay hahatakatra ny fomba fampiasan'ny mpitsidika ny tranokala ary ampiasainay hanatsarana ny tolotra izany. Ny Google Analytics dia mitahiry ny adiresy IP tsy mitonona anarana amin'ireo mpizara any Etazonia, ary tsy io tranonkala io na i Google no mampifandray ny adiresy IP anao miaraka amin'ny fampahalalana misy azy manokana. Ireo cookies ireo dia ahafahan'i Google mamantatra raha mpitsidika ianao hiverina amin'ilay tranokala ary hitsinjo ireo pejy izay notsidihinao nandritra ny fivoriana. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny Google Analytics sy ny fomba fijery momba ny politika momba ny fiainana manokan'ny Google mitsidika ny fanampian'ny Google Analytics.
Google Analytics dia mametraka ireto cookies manaraka ireto (tamin'ny Janoary 2020):
_ga - vokarin'ny kisendrasendra, kaody tsy fantatra manavaka mpampiasa
_gid - efa zatra manavaka mpampiasa
_gat - Ampiasaina hamaritana ny tahan'ny fangatahana doka amin'ny tolotra
gsScrollPos* - Nampiasaina hanomezana ny analytics ambaratonga pejy
Hiala tsy ho anisany
Mba hisorohana manokana ny Google Analytics tsy hametraka ny cookie, azonao atao ny mampiasa ny fanitarana ny Google Analytics Opt Out Browser extension.
Azonao atao ny manakana ny cookie rehetra amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny toeran'ny browser. Na izany aza, mety hisy fiantraikany amin'ny traikefanao amin'ny tranokalanay sy ny hafa izany.
Mandefa fampahalalana any ivelany
Amin'ny maha-orinasa ara-tsosialy miasa eto Madagasikara, fantatsika fa ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra dia mety tsy henjana toa ny sehatra hafa, ohatra ny Etazonia, Angletera ary Eropa. Na izany aza, mandray ny fepetra ilaina rehetra izahay mba hiarovana tsara ny angon-drakinao amin'ity toe-javatra ity.
Azonao atao ny mangataka ny dika mitovy avy amina vaovao nohazoninay aminao, amin'ny fotoana rehetra (izay mety andoavantsika vola kely izahay). Hanitsy ny tsy fahatomombanana ao amin'ny fampahalalana anao amin'ny fangatahana koa izahay.
Fiovana amin'ity politika manokana ity
Raha manova ny lalànan'ny fiainana manokana izahay, havaozinay ity pejy ity, ary raha mety dia mety hifandray aminao amin'ny alàlan'ny mailaka koa. Ity farany tamin'ny politika dia nohavaozina farany tamin'ny Janoary 2020.
Raha manana fangatahana mombamomba anao manokana ianao na misy fanontaniana momba ny fampiasana izany, azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny info@tatirano.org.
Tatirano SARLU dia orinasa voasoratra eto Madagasikara.
Mahakasika Tetikasa Fifandraisana Statirano Fianana manokana
Copyright ©2019-22 Tatirano SARLU, zon'ny mpamorona rehetra.